ओली सरकारका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमा र्‍याली, आयोजक को ? « Pahilo News
ओली सरकारका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमा र्‍याली, आयोजक को ?
प्रकाशित मिति : 15 July, 2016 11:41 am
३१ असार । ‘केपी ओली सरकारको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनका निम्ति माइतीघर मण्डलामा उपस्थित होऔँ’ स्वतन्त्र युवा अभियानका नामबाट सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको निम्तोपत्र बिहीबार भाइरल बन्यो । त्योसँगै अर्को निम्तोपत्र पनि बिहीबार नै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो ।
त्यसमा चाँहि ‘राजनीतिका लागि होइन, सन्ततिका लागि, ओलीका लागि होइन भोलिका लागि, कुर्सी बचाउनका लागि होइन देश बचाउनका लागि’ उल्लेख गरिएको थियो । ती दुबै सूचनापत्रलाई मुख्य गरेर अनेरास्ववियु र युवा संघका कार्यकर्ताले बढी भन्दा बढी प्रचार गरे । युवा संघका अध्यक्ष राजीव पहारीदेखि अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामासम्मले ती सूचनापत्र आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट गरे । कतिपय युवाले त ‘म त जाने भएँ तपाईं पनि आउनु है’ भनेर निकै नरम शैलीमा निम्तो पनि दिन भ्याए ।
कार्यक्रमका बारेमा जिज्ञासा राख्दा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले प्रष्ट जवाफ दिन सकिनन् । ‘यो सबै न्यायप्रेमी युवाको कार्यक्रम हो,’ उनले टेलिफोन मै भनिन्,’ तपाईं पनि अनिवार्य आउनु है ।’
राष्ट्रिय झण्डासहित शुक्रबार ठीक तीन बजे केपी ओली सरकारको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनका माइतीघर मण्डलामा आउन निम्ता दिइको त्यो सूचनापत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि कायक्रमको आयोजक को ? कसरी गर्ने तयारी छ ?
आदिका बारेमा जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर, हजारौँ मान्छे उतार्ने तयारी गरिएको त्यस कार्यक्रमको आयोजक स्वतन्त्र युवा अभियान भनिए पनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सबै अन्योलन नै रहेको पाइयो । कार्यक्रमका बारेमा जिज्ञासा राख्दा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले प्रष्ट जवाफ दिन सकिनन् । ‘यो सबै न्यायप्रेमी युवाको कार्यक्रम हो,’ उनले टेलिफोन मै भनिन्,’ तपाईं पनि अनिवार्य आउनु है ।’
अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष सुनिता बरालसँग पनि त्यति प्रश्न गरियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘म त यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भए, तपाईं नि ?’ भनेर पोष्ट गरेकी बरालले पनि ट्क्याक्कै केही बताउन सकिनन् ।
‘राष्ट्रियता, स्वाधिनता र विकासको लागि ओली सरकारको निरन्तरता’ भन्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलाबाट राष्ट्रव्यापीरुपमा र्‍याली निकाल्ने तयारीबारे युवा संघका प्रवक्ता प्रभावविक्रम कटुवालसँग पनि जिज्ञासा राखियो उनले पनि लामा र बरालकै जस्तो प्रतिक्रिया दिए । ‘यो स्वतन्त्र युवाहरुको कार्यक्रम हो,’ कटुवालले भने, ‘युवा संघलाई पनि मन पर्यो त्यहि भएर हामी कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौँ ।’